Isuphu yeTapile eCreamy (Kulula ukuyenza) - Iiresiphi
Isuphu yePotato eCreamy
Le Sophu yePotato kulula kakhulu ukuyenza, ityebile kwaye ikhrimu kwaye ilayishwe ngokupheleleyo ngencasa!
Iitapile zethu ezibhakiweyo ezibhakiweyo zongezwa ngokugqibeleleyo kule suphu kubandakanya ibhekoni kunye nedosi yesisa yetshizi ye-cheddar. Ukutya okugqibeleleyo!
Iipatata ezilungileyo kakhulu zeSuphu
Naluphi na uhlobo lweetapile luya kusebenza kule recipe. Ndiyathanda ukusebenzisa iitapile ezibomvu zesuphu kuba ziqinile kodwa zivelisa isiphumo se-creamier. Gcina kancinci ulusu kwinkangeleko yasekhaya kunye nencasa! Igolide yeYukon ilungile nalapha!
Iitapile zaseRusset ziqhekeka kancinci kodwa azityibiliki njengetapile ebomvu okanye iYukon. Ukuba usebenzisa i-russet okanye iitapile zokubhaka, zixobule izikhumba kuqala.
Inyama yehagu Le recipe isebenzisa i-bacon ye-real deal endaweni ye-bacon bits kuba sisebenzisa i-yummy bacon fat ukupheka i-anyanisi. Incasa eninzi!
Umhluzi Ndisebenzisa umhluzi wenkukhu kuba ndiyayithanda incasa, umhluzi we-veggie uyasebenza!
Ubisi Ubisi luyenza ibe bukhrim ngaphandle kokwenza ukuba ibenzima kakhulu okanye ityebe. Ukutshintsha ubisi olungelulo olobisi ukuba uyafuna okanye ubisi oluqhunyiweyo.
Ukongeza-Ins Nantoni na oyiphakamisayo oyithandayo izambana elibhakiwe nge iya kuba yongezwa kakhulu kule suphu! Ndiyongeza i-bacon kunye ne-cheddar ebukhali.
Uyenza njani isuphu yetapile eCreamy
Ngelixa le recipe yeyokuqala kwesitovu, unokufumana esikuthandayo inguqulo ye-crockpot apha (okanye kwi Imbiza ekhawulezileyo ). Ukwenza oku kwisitovu:
Pheka i-bacon, itswele, kunye negalikhi kude kube nevumba elimnandi (kwiresiphi nganye engezantsi).
Yongeza umhluzi kunye neitapile kwaye ubilise de ube ithenda.
Sebenzisa imasher yeitapile ukutyumza ezinye iitapile. Ixesha ngetyuwa kunye nepepile kwaye wongeze kwi-cheddar ushizi, ukhilimu omuncu, i-chives, kunye nebhekoni.
Le suphu inencasa kwaye inentliziyo, ngokwenene ibiza kuphela amacala alula njenge isaladi kunye ne-vinaigrette e-tangy kwaye mhlawumbi ezinye isonka segalikhi yokudipha.
Ukusuka inyama kunye nesobho setapile kwi lula isuphu yelikhi yeitapile okanye nkqu i-broccoli egcadiweyo , izinto ezinokwenzeka azipheli.
Iitshizi (ininzi into ehambayo)
I-Jalapenos eyosiweyo okanye iipepile
Kuphekiwe isoseyiji , inyama eseleyo
Iintsalela zitshisa kakuhle kwisitovu okanye kwi-microwave.
Ngokudabukisayo iisuphu ezinobisi azikhenkcezi kakuhle njengoko zinokutshintsha ukuhambelana. Ukuba uyenza umkhenkce le sobho, yiba ngumkhenkce phambi kokuba wongeze ukhilimu omuncu. Phinda ufudumeze ngokucothayo kubushushu obuphakathi ukuze ungabubumbi ubisi.
IiSuphu eziNtozelekileyo ezineCream
I-Broccoli Cheese Soup
ISophu yeButternut Squash
I-Cream yeSuphu ye-Mushroom
Isuphu yePotato eSwiti
ISuphu yeBacon yePotato eCreamy
Ngaba uyayithanda le Sophu yeKream yePotato? Qinisekisa ukushiya umlinganiselo kunye nenkcazo apha ngezantsi!
5ukusukaAmashumi amabiniiivoti ReviewIndlela yokupheka
Ixesha lokulungiselelaAmashumi amabini imizuzu Ixesha Lokupheka30 imizuzu Ixesha elipheleleyoAmashumi amahlanu imizuzu Iinkonzo4 Umbhali Holly Nilsson Le recipe ilungelelaniswe ngokulula kwiiyantlukwano ezininzi ezahlukeneyo ngokubhekiselele kwi-add-ins kunye ne-mix-ins, akukho ndlela onokuthi uhambe ngayo!
▢6 ngqindilili izilayi zebhekoni inqunqwe
▢½ itswele elimhlophe idayisi
▢4 iicloves igalikhi igayiwe
▢¼ indebe uflawo wezinto zonke
▢Mbini iikomityi inkukhu stock
▢Mbini iikomityi ubisi lonke
▢Mbini iiponti iitapile ezibomvu ihlutshiwe kwaye yanqunyulwa encinci
▢Nye indebe cheddar itshizi ebukhali iqhekeziwe
▢¼ indebe itshiphu igayiwe
▢Ityuwa yeKosher ukungcamla
▢Ipelepele emnyama ukungcamla
Pheka ibhekoni kwimbiza yesuphu phezu kobushushu obuphakathi de ibe crispy kwaye ibe mdaka. Gxininisa ibhakoni kwipleyiti enetawuli yephepha. Shiya amafutha ebhekoni embizeni.
Yongeza i-anyanisi kwaye upheke de iqale ukuthambisa, malunga nemizuzu emi-5. Yongeza igalikhi kwaye upheke omnye umzuzu de ube nevumba elimnandi.
Fafaza umgubo kwaye ugxobhoze ukudibanisa. Umxube uya kuba mkhulu.
Gcoba kancinane kwisitokhwe senkukhu kunye nobisi de umxube ube mpuluswa kwaye akukho maqhuma aseleyo.
Yongeza kwiitapile kwaye unciphise ubushushu ukuya phakathi-phantsi. Vumela iifatata zipheke ngobumnene, zivuselele ngamanye amaxesha de zibe zithambile. Qinisekisa ukuba umxube awubi njengoko ubisi lunokutsha.
Xa iitapile zithambile, sebenzisa i-masher yezambane ukuze udibanise ngobumnene ezinye zeetapile ukuze wenze ukuhambelana okunobukhrim.
Gxuma kwi-cheese edibeneyo, ukhilimu omuncu, i-chives, kunye ne-bacon e-crispy. Yingcamla kunye nexesha kunye nenani elifunekayo letyuwa ye-kosher kunye nepepper.
Iikhalori:484.87,Iicarbohydrates:55.69g,Iprotheyini:20.02g,Amafutha:20.88g,Amafutha aGqithisiweyo:12.03g,ICholesterol:60.41mg,Isodium:464.61mg,Potassium:1419.29mg,Ifayibha:4.36g,Iswekile:12.64g,IVithamin A:784.52IU,Ivithamin C:23.41mg,Ikhalsiyam:408.04mg,Iayini:2.56mg
Autism Imiboniso Yesilayidi Uqhawulo Mtshato Ngurhulumente Spa Vacation Destinations Isizwe Kunye Nenkcubeko Costumes Ukutshaya
zii-oats ezindala ezindala ezingenayo i-gluten
ukucoca isibane setyuwa
unxibe ntoni emngcwabeni ukuba awunayo isuti
ungayifumana njani indoda ye-sagittarius ukuba izibophelele
ndiziva ngathi andinabahlobo
taurus umfazi kunye nomhlaza ukuhambelana kwendoda
ndingawufumana phi umsebenzi nge-16